Inzwa yokuphoqa, inzwa yokungezwani, ukulayisha iseli - XJCSENSOR
S Uhlobo Lomthwalo Wamaseli
Inzwa ye-Muti-axis Force
Layisha Ukuboniswa Kwamaseli
Ukusetshenziswa kweRobotic Field
Isicelo Samandla Amasha
I-XJCSENSOR 360 °
Ubudlelwano babatshali zimali
isixazululo esihamba phambili sokulawulwa kwesistimu yezimboni nomhlinzeki womkhiqizo
Inzwa yama-axis amaningi
Isibonelo Esisha Sokusebenza
Ukusetshenziswa Kwensimu YeRobotic
Inzwa iyisimo se-elekthronikhi ku-robot ehlakaniphile. Inzwa ye-torque ehlangene yeXJCSENSOR isetshenziswa kakhulu ekuhlanganisweni kwerobhothi elihlakaniphile. Ingafakwa eduze kocingo kanye nenkomishi yokudonsa yengalo yamarobhothi ukusiza irobhothi ligweme izithiyo, lisize ekutholeni iqiniso lokuthi into ebanjiwe iyawa ngesikhathi sokunyakaza, noma ingafakwa kurobhothi elihambayo, irobhothi lokubambisana, kanye umshini wokukhiya isikhiye.
Inzwa ye-XJC inezinhlobonhlobo zezinhlelo zokusebenza emotweni, futhi ngokuthuthukiswa kobuchwepheshe bethu, inzwa izoqhubeka kancane kancane, ngosayizi omncane, ukuthembeka okuphezulu, ukuzwela okuphezulu, ukulungiswa okuphezulu, ukukhishwa kwedijithali njalonjalo.
Uhlobo lwenkinobho ye-XJC pressure sensor type & S type is used to detect the tensile force or pressure exerted or resistant by the target, such as press machine, high precision punch press, material testing machine, automation equipment and othomathikhi uhlelo lokulawula, metallurgical powder industry extrusion molding imishini.
Ngokuthuthukiswa kwemakethe yemishini yezokwelapha, izidingo eziphezulu zibekwa ekusetshenzisweni kwezinzwa zokucindezela embonini yezokwelapha. Izinzuzo zokunemba okuphezulu, ukuthembeka, ukuzinza nosayizi omncane wochungechunge lwe-D kuXJCSENSOR ngokungangabazeki zingumongo wemishini yezokwelapha. Imishini yokufaka ejwayelekile ifaka imibhede yezokwelapha, amaphampu wesirinji, imishini yezokwelapha yokuvuselela, amarobhothi okuhlinza, imishini eyi-B-ultrasound ekude, njll.
Insimu entsha yamandla ayikaze ichume njengale. Ukusetshenziswa kwe-Xin Jingcheng inzwa yengcindezi emkhakheni wamandla amasha kufaka: inzwa yokungezwani isetshenziswa ku-winder, emboza umshini wendwangu; I-XJC-D01 isetshenziselwa okokusebenza komjovo oketshezi, njll.
Inzwa ye-XJC ngenxa yempendulo yayo esheshayo, ukulungiswa okuphezulu, ukufeza kalula ukulinganisa okungathintani, ukucacisa okuphezulu ukuthembeka okuhle, kuhlanganiswe nosayizi wayo omncane, isisindo esincane, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi nokuhlanganiswa okulula, kusiza ukuthola ngesikhathi esifanele nokubhekana nezinkinga okulula ukwenzeka emsebenzini wemishini yezolimo, futhi kungakhuthaza ukuthuthukiswa kwemishini yezolimo ezishintshayo nokuqinisekisa imishini yezolimo. Ukuthembakala kokusetshenziswa, ukunciphisa ukusetshenziswa kwamandla, nokonga emandleni nasezinsizakalweni.
XJC S-uhlobo ingcindezi inzwa kuyingxenye ebalulekile engineering imishini imishini umkhakha; isicelo sayo ikakhulu sifaka: okokuqala ukulawula izimo zokusebenza kwenjini; okwesibili - ukulawula uhlelo wokubacindezela; okwesithathu kungukulawulwa kokusebenza konke kwemishini yobunjiniyela; Izimoto zasemoyeni, ama-cranes, ama-cranes wombhoshongo, ama-cranes, njll.
I-XJC D yochungechunge lwesilayidi senzwa ingcindezi esetshenziswa kakhulu ekusebenzeni kwezimboni. Uhlelo lwayo olucacisiwe lusemishini yokubhaka, imishini yokupakisha, isisindo kanye nokuhlunga imishini, njll.
Inzwa ye-XJC inzwa esetshenziswa kakhulu kunazo zonke emkhakheni wamathuluzi okuzenzakalelayo. Iyakwazi ukubona amandla we-torque namandla we-axial ngenkathi ithola i-torque. Izicelo ezithile zifaka: i-digital torque wrench, i-digital screwdriver kagesi, i-closed-loop torque feedback tightening shaft, njll
IShenzhen XJCSENSOR Technology Co., Ltd.
I-Shenzhen XJCSENSOR Technology Co., Ltd. (XJCSENSOR) yasungulwa ngo-2009 nendawo engama-4000 m2. I-XJCSENSOR ikomkhulu layo e-SZ. CN, futhi inamahhovisi eSuzhou, eHong Kong naseJalimane.
Ebhekene "nesiqalo esinzima" esibangelwe ubhadane lwango-2020, imboni yezokukhiqiza yasekhaya yaseChina ihlushwe amagalelo alandelanayo, futhi ubunzima bokuqalisa kabusha umsebenzi nokukhiqiza sekuvelele. Ngemuva kwalesi sifo, indabuko yokukhiqiza izinto zokusebenza ...
Ungahlola kanjani ukusebenza okuyisisekelo kwenzwa yamandla
Inhloso yokuhlola yeseli yomthwalo ukusungula ukuhlangana phakathi kobukhulu benani lamandla nenani lesignali yokukhipha. 1) Iyunithi yokukala Kusukela ngeNgqungquthela Yomhlaba Yamazwe Ngamazwe ye-Metrology ngo-1990, amazwe emhlabeni jikelele alandelana ...
NgoFebhuwari 2021 XJCSENSOR Ukukhishwa komkhiqizo omusha we-Multi-axis sensor
Kusuka ngoFebhuwari 2021, iXJCSENSOR ikhiphe ngokulandelana yakhipha izinhlobo ezintsha ze-multi-axis force sensor ukusiza ukuthuthukiswa kwemboni 4.0 yokukhiqiza okuhlakaniphile okuzenzakalelayo. Umkhakha we-4.0 ukuqaphela ukuzenzekelayo okuhlakaniphile kwemithombo yemvelo kusuka ekuthuthukisweni, ukuqoqwa ...
F1-2, NO.101, Bldg 17, 228 Industrial Zone, Umphakathi waseSilian, uHenggang Str., Longgang Dist., Shenzhen, CN.